प्रियंका कार्कीको बिकनी पोज ( हट तस्बिर )
नायिका प्रियंका कार्की फ्ना केही साथीको साथमा उनी ‘ब्याचलर पार्टी’ मनाउन थाइल्याण्ड पुगेकी हुन् । तर, थाइल्याण्डमा पुगेकी प्रियंका र उनका साथीहरुको ‘ब्याचलर पार्टी’ले सामाजिक स
साराको विकिनी अवतारले बलिउडमा मच्चियो हंगामा ( हेर्नुहोस् हट तस्बिर )
सारा अलि खान उनि सेफ अलि खान कि छोरी हुन्। अहिले उनले आफ्नो ताजा जानकारीमा समुद्री किनारमा सूर्योदयको दृश्य फोटोमार्फत प्रस्तुत गरेकी छन् । सारा अली खानको अब आउदै गरेको फिल्महरू इम्तियाज अलीको निर्देश
इराको हट फोटोसुट ( हेर्नुहोस् हट तस्बिर )
आमिर खानकी छोरी इराले इन्स्टाग्राममा आफ्नो नयाँ फोटोशूटका तस्वीर पोस्ट गरेकी छिन् । यो फोटोमा इरा निकै हट देखिएकी छिन् । फोटोसुटमा उनी थाइ स्लिट, ब्याकलेस गाउनका देखिएकी छिन् । २१ वर्षकी इराको यो फोट
फिगरका कारण चर्चामा पटानी ? हट तस्बिर
बलिउड अभिनेत्री दिशा पटानीको सुन्दर फिगरको सबैले चर्चा गर्ने गरेका छन । उनको मेन्टिनेन्सको समेत तारिफ गर्ने गर्छन् ।उनी आफूले भने आफू आलुजस्तो देखिने गरेको बताएकी छिन् । पछिल्लो समय आफूले खानपिनमा ध्य
मुम्बईमा रहँदै आएकी यी अभिनेत्रीले ‘कृ’ पछि अन्य फिल्ममा अवसर पाएकी छैनिन् । तर, उनले आफ्नो ग्ल्यामर अवतारका कारण दर्शकको ध्यान भने खिचिरहन्छिन् ।पछिल्लो समय अभिनेत्री अदितिलाई भारतीय र्&z
आइल्याण्डको समुद्र किनारमा बोल्ड नेहा
सामाजिक संजालमा नेहा आफ्ना फ्यानका लागि तस्वीर शेयर गरिरहन्छिन् । अहिले पनि नेहाले विदामा घुम्न जाँदाका तस्वीर शेयर गरेकी छिन् । अहिले उनी हवाइ आइल्याण्डमा छिन् ।नेहाले हवाइबाट केही तस्वीर शेयर गरेकी
इलियानालाई आफ्नो शरीरको बनावट बारे यति धेरै प्रफुलित !
नायिका इलियाना डीक्रुज सामाजिक संजालमा आफ्नो फोटो राख्न अगाडि छिन् । तर, उनलाई आफ्नो हट तस्वीर सार्वजनिक गर्न पहिले समस्या लाग्थ्यो । इलियाना भन्छिन्–‘मलाई मेरो शरीरलाई यो तरिकाले स्विकार
विकिनीमा ‘हरे राम’, बाणी माथि सामाजिक संजालमा ट्रोल !
बलिउड अभिनेत्री वाणी कपुरले इन्स्टाग्राममा ‘हरे राम’ लेखेको विकनी लगाएको तस्बिर सेयर गरेपछि विवादमा तानिएकी छन्। उनले विकनीमा भगवान्को नाम लेखेर धर्मप्रति अपमान गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालम